Laanta Socdaalka oo Holland u dirtay baadhitaan luuqado muran dhaliyay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Barnaamij gaar ah: Baadhida Luuqadaha ee Laanta Socdaalka
La daabacay tisdag 18 november 2014 kl 17.04
Usbuucii hore ayaa barnaamijka Uppdrag granskining ee ka baxa Taleefeshinka Qaranka Sweden SVT uu u kuurgal uu sameeyay wuxuu daaha kaga fayday in tayada baadhitaanada dhanka luuqadda ee laga qaado dadyowga magengeliyo doonka ay aad u liidato, baadhitaanada oo lagu jaangooyo waraysi 20 daqiiqo ah oo laga qaado qofka magangelyo doonka ah
Luuqad baadhayaasha shirkadda Sprakab (oo iyadu ah shirkadda Migrationsverket ka iibisa baadhitaanada luuqadda ruuxa magangeliyo doonka ah), ayaa ah kuwo magacyadooda qarsoodi yahiin, ayna adag tahay in la koontoroolo aqoontooda iyo awoodooda xirfadeed. Sidaa awadeedna waxaa uu barnaamijku fashiliyay in mid ka mid ah xeel dheerayaasha baadhitaanka luuqada Soomaaliga u qaabilsan shirkad Sprakab oo magaciisa summad looga dhigay ea20 uu ka been sheegay warqada aqoonsiga ee uu ku shaqo galo iyo sidoo kale in uu dembiyo galay oo xukun ku dhacay. Shakhsigan ayaa ku lug lahaa go’aamo laga gaadhay ilaa 5000 oo qof oo dacwado magan-gelyo doon.
Imika ayaa Laanta Socdaalku go’aan ku gaadhay in baadhitaanadii luuqada ee muranka dhaliyay ee ay hore u samaysay shirkada Sprakab loo diro laanta socdaalka ee waddanka Holland, si loogu sameeyo dib u hubin madax-banaan.
Fredrik Bengtsson, madaxa saxaafada u qaabilsan Laanta Socdaalka Sweden.
-Waxaa noo socda wada hadal shirkada Sprakab, baadhitaanadii lagu soo qaatay barnaamijka Uppdrag granskning e emuranka dhaliyayna waxaanu u diray Holland. Si hey’addaha Holland ay ugu sameeyaan baadhitaano madax banaan.
Fredrik Bengtsson oo aanu waydiinay in taa macnaheedu yahay in hey’addaha Holland ay u hayaan kalsooni ka badan, middi ay u hayeen shirkada Språkab ayaa leh
-Ma rabo in aan sidaa idhaahdo, balse qaybtan waxaa muhiim ah in aan helo baadhe madax-banaan oo eega baadhitaanada aan is waafaqsanayn.
Arrinkan ayaa dood badan dhaliyay, iyada oo laga biyo diiday wada shaqaynta ka dhaxaysa Laanta Socdaalka iyo shirkada Sprakabo o iyadu baadhitaano ku samaysa luuqadaha iyo lahjadaha kala duwan. Sidoo kale waxaa aad loo dhaleeceeyay in nolosha qof dhan lagu go’aamiyo 20 daqiiqo.
Jaamac ayaa isaga saddex jeer laga qaaday baadhitaanka luuqada, iyada oo saddexda jeerba saddex natiijo oo kala gedisan ay ka soo baxeen baadhitaankisa, sida u noo sheegay. Middaas oo sababtay in la sharciga loo diido.
Balse Madaxa saxaafada u qaabilsan Laanta Socdaalka, Fredrik Bengtsson ayaa isagu leh baadhitaanka luuqadu maaha midka go’aaminayay dacwada qofka magangelyo doonka ah.
-Sidaan hore u sheegnay baadhitaanka luuqadu waa qayb ka mid ah xogta go’aanka , keligiina ma noqon karo midka go’aaminaya sida dacwadu noqonayso, balse waa in la isu dheelitiro dhamaan cadaymaha. Ayuu leehay Fredrik Bengtsson, oo ah masuulka u qaabilsan Laanta Socdaalka saxaafada.
Si kastaba ha ahaate, madaxa Laanta socdaalka u qaabilsan saxaafada Fredrik Bengtsson ayaanu waydiinay bal in ay dib ugu noqonayaan dhamaan dacwadihii magan gelyo doonka ee uu ku lug lahaa baadhaha luuqada shirkada Sprakab ee magaca sumadiisu tahay ea20, maddaama oo la ogaaday in uu ka been abuuray waqradiisa shaqada, sidoo kalena loo arko qof aan ku haboonayn shaqada uu u hayay shirkada Sprakab, oo iyadu Laanta socdaalka u samaysa baadhitaanka luuqadaha iyo lahjadaha.
-Maya si guud, lakiin haddii ay jiro baadhitaan luuqadeed oo gal-daloolooyin leh, dabcan dib ayaanu u eegaynaa. Balse ma jiro baadhitaan guud oo aanu ku samayn doono baadhitaanada hore loo sameeyay.
Fredrik Bengtsson, madaxa saxaafada u qaabilsan Laanta Socdaalka ayaa isaga oo ka waramaya habka qofku dacwad cusub u furan karo, haddiiba baadhitaanka luuqadiisa ay ka muuqdaan gal-daloolooyin
-Waa sida dacwadaha magan-gelyo doonka ee kale, qofku wuxuu soo bandhigi karaa sabab cusub inta dacwadu socoto, qofku wuxuu dalban karaa baadhitaankii lagu sameeyay luuqadiisa si eegi karaa haddiiba ay wax ka qaldan yihiin, oo uu u muujiyo gal-daloolooyinka ka muuqdo. Markaas ka dib qofku middaasi wuxuu u soo bandhigi karaa arrin cusub isaga oo kaashanaya kalkaaliyihiisa.
Dad badan oo ku dhaqankan waddankan Sweden ayaa dhaleeceeyay habka Laanta Socdaalku u aamintay shirkada Sprakab iyo baadhayaasheeda luuqadaha.
Oday Ciise iyo Maxamed Cabdi oo ka mid ah dadka daawaday barnaamijka laga diyaariyay baadhitaan luuqadaha ee Laanta Socdaalka, ayaa leh Laanta Socdaalku qofka ay rabto in ay lahjadiisa soo ogaato ha soo waydiiso jaaliyada gobolka u sheegtay
Bale Yoonis ayaan isagu la qabin fikirkaas, isaga oo aaminsan in Laanta Socdaalku ay hawsheeda u madax banaanaato, balse baadhitaanada luuqadaha loo saaro guddi koox ah, ee aan lagu aaminin hal qof.